Filaharana masina – 2trondro
Home / Fiangonana / Ny sakramentan'ny / Filaharana masina
Filaharana dia sakramenta izay olona ankasitrahana ny olona na “notendrena” ny Fiangonana mba hanatanteraka ny hafa enina sakramenta. Mety ho ny olona diakona, mpisorona na ny eveka.
Na izany aza, ny sakramentan'ny Filaharana no tanterahana raha tsy amin'ny alalan'ny Eveka, ary izay manaraka mivantana avy ao amin'ny Baiboly.
Misy fomba iray napetraka ao amin'ny Soratra Masina izay ny antson'Andriamanitra ho amin'ny asa fanompoana no nomena ary nahazo. Izany mikoriana avy amin 'Andriamanitra an'i Jesosy, Jesosy ho any amin'ny Apôstôly, ary avy any amin'ny Apôstôly ny mpandimby (jereo Filazantsaran'i Lioka 10:16 ary ny Filazantsaran'i Jaona 13:20; 20:21). Noho izany, ny sakramentan'ny Filaharana dia azo tanterahana raha tsy amin'ny alalan'ny Apôstôly na ihany ny anankiray teo izay fahefana maha-apôstôly dia nomena tamin '. Ohatra, I Paoly manoratra ao amin'ny Taratasy Voalohany ho An'i Timoty (4:14), “Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana anananao, izay nomena anao tamin'ny faminaniana hoy i rehefa ny filan-kevitra ny anti-panahy nametra-tanana anao” (jereo 5:22, ny Taratasy Faharoa ho An'i Timoty, 1:6, ary ny Taratasy ho an'i Titosy 1:5). Noho izany, ny fanasan 'ny Tompo manaraka ny nitsaharan'ny rojo Jesosy ny ankehitriny ny vaovao mompera. (Fanampiny momba izany eto ambany.)
Ao amin'ny Fiangonana tany am-boalohany, ny ambaratongam-pahefana lasa izay nahitana ny Eveka, Pretra (na ny anti-panahy), sy ny diakona, izay mifanitsy ny Isiraely ny telo ahitana ambaratonga rafitry ny mpisoronabe, mpisorona, ary ny Levita (Jereo Paoly Taratasy ho an'ny Phillipians, 1:1; Saint James’ epistily, 5:14; Ny Bokin 'Numbers, 32; Ny Bokin 'i Faharoa Tantara 31:9-10).1 amin'ny Israely, ny mpisorona dia hita ho toy ny tsy manan-tsahala iraky (jereo Malakia 2:7), raha natokana avy amin'ny fiangonana iray fanosorana sy ny fametrahan-tanana (jereo Fifindra 30:30 na Deuteronomy 34:9).
Noho izany ny Apôstôly dia Jiosy, ny Fiangonana nolaniana ireo fomba amam-panao jiosy noho ny fombam-pivavahana ny Fanokanana.
Moa tsy isika rehetra mpisorona?
Tsy misy, fa indraindray ny olona dia very hevitra noho ny hafatra ara-baiboly fa ny mpino rehetra no antsoina handray anjara amin'ny Kristy fisoronana. Ohatra, Saint Petera Taratasy Voalohan'i Md (2:9) firenena, “Ianareo kosa dia taranaka voafidy, sady mpisorona no mpanjaka, firenena masina, Ny ny olona.” Ireo teny ireo ny momba hiverina any Fifindra 19:6, “Ary ho Ahy ho fanjaka-mpisorona sy ho firenena masina.”
Nanokana ny fahefana hanatanteraka ny sakramentan'ny vondrona manokana ny olona (mpisorona) dia fantatra amin'ny anarana hoe sacerdotalism.
Ao amin'ny Fanekem-pihavanana Taloha, kely kokoa, sacerdotal fisoronana nisy mpisorona lehibe ao anatin'ny firenen'ny Israely. Rehefa manazava, dia iray ihany izany ao amin'ny Fanekem-pihavanana Vaovao.
Milaza ny Baiboly ny sacerdotal fisoronana mba ho tsara fanahy ny ray ara-panahy, izay no mahatonga ny Eglizy Katolika dia mampianatra fa fanendrena mpisorona no natokana ho an'ny lehilahy ihany. Ohatra, ao amin'ny Testamenta Taloha, ny Bokin'ny Mpitsara (18:19) firenena: “Andeha hiaraka aminay, ary aoka ho aminay ny rainay sy mpisoronay ianao.”
Toy izany koa, ao amin'ny Testamenta Vaovao, I Paoly manoratra ao amin'ny Taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina (4:15) fa “Fa na manana mpitari-dalana maro be ao amin'i Kristy, tsy manana ray maro. Fa izaho no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy noho ny Filazantsara.” Novelabelarin'i i Paoly bebe kokoa momba ity ray ara-panahy na sacerdotal fisoronana teo am-piandohan'ny toko io ihany, raha hoy izy, “Izany no fomba tokony tsy mandinika antsika, ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina'ny zava-miafina 'Andriamanitra” (4:1).2
Tamin'ny vao nanomboka ny fanompoany, Nanamarika i Jesosy fa nitovy ny vahoaka “ny ondry tsy misy mpiandry,” nanao hoe:, “Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin'izany mangataha amin'ny Tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra” (jereo Matthew 9:36, 37-38). Ireo fanamarihana teny fampidirana ny fifantenana ny Apôstôly Roambinifolo, izay hery ka naniraka toy ny isoloana tena mpiandry ho mahatoky (jereo ny Filazantsaran'i Jaona 21:15-17; ny Asan'ny Apostoly 20:28; ary Petera Taratasy Voalohan'i Md 5:2). “Tsy ianareo no nifidy ahy,” Nampahatsiahy azy ireo izy tatỳ aoriana, “fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo fa tokony handeha sy hamoa” (John 15:16). “Ahoana no ahafahan'ny olona fitory, raha tsy nirahina?” Hoy i Paoly ao amin'ny Taratasiny ho an'ny Romanina, 10:15.
Na aiza na aiza ao amin'ny Soratra Masina ny olona no mihevitra ny fanompoana ho an'ny tenany. “Ny iray tsy maka ny voninahitra ny tenany, fa efa niantsoana ny Andriamanitra, tahaka Arona,” manoratra i Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Hebrio 5:4 (hahita ny Taratasy ho an'ny Kolosianina 1:25, koa). Rehefa exorcists Jiosy sasany miezaka mafy ratsy fanahy “ny Jesosy Izay torin'i Paoly,” ny fanahy navalin'i, “Jesosy Fantatro, ary Paul Fantatro; fa iza moa ianao?” (Asan'ny Apostoly, 19:13, 15).
Noho izany, ny manan-kery niantsoana azy ho ao fanompoana mazàna mitaky ny fandraisana ho mpikambana avy amin'ny apôstôly ambaratongam. Ohatra, ao amin'ny Act 'ny Apôstôly (1:15), Matthias tsy mitsangana sy hitondra ny biraon'ny fanompoana eo amin'ny volition. Izy dia voafidy araka ny hery an'i Petera sy ny Apostoly, eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina. Ary tsy manao Paul, na dia eo aza ny mampivarahontsana fiovam-po, Niainga teo ny mba hitory ny Filazantsara, milaza ny fanosorana ho an'ny tenany. Araka ny voalaza ao amin'ny Taratasy ho An'ny Galatianina (1:18), dia mandeha izy aloha ho any Jerosalema mba handray ny fankatoavana ny Apôstôly, ary tatỳ aoriana, ka miverina ho hanamarinana ny filazantsara dia ny fitoriana ny marina (2:2).
Raha ny Kristianina rehetra nantsoina hitory ny filazantsara, ny apostoly sy ny mpandimby manana ny antso miavaka ny fiarovana ny fametrahana-pinoana sy ny fampianarana ny mpino. ao amin'ny Filazantsaran'i Matio (28:19-20) Hoy Jesosy ny Apôstôly, “Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.”
Toy izany koa, ao amin'ny Taratasy Faharoa ho An'i Timoty, Paoly dia mampianatra: “Hiaro ny fahamarinana izay efa nomena anao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, Izay mitoetra ao amintsika,… Ny zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro atolory ny olona mahatoky, izay dia ho afaka mampianatra ny sasany kosa.” (jereo ny andininy 1:14; 2:2; 1:13; ary ny Asan'ny Apostoly 2:42).
Raha ny marina, rehefa mampianatra ny mpanao fanompoam-pivavahana izany dia i Kristy mihitsy no mampianatra amin'ny alalan'ny azy ireo tahaka ny hoe:: “Izay mihaino anareo dia mihaino ahy, ary izay mandà anareo dia, mandà ahy, ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy” (Luke 10:16). Any an-kafa dia hoy, “Marina tokoa, tena, Lazaiko aminareo, Izay mandray misy olona izay anirahako dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray Izay naniraka Ahy” (John 13:20; nampiana fanamafisana).
Ny Apôstôly dia nomena ny fahefana ny niahy fankalazana ny Eokaristia. Ohatra, raha nanombohany ny Eokaristia ao amin'ny Fiaraha-misakafo Farany, Dia manao veloma azy ireo, “Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy” (Luke 22:19 ary Paoly Voalohany Taratasy ho an'ny Korintiana, 11:23-24). Ny Apôstôly manam-paharoa mandray anjara amin 'ny fisoronana sy miaraka aminy ny lohan'ny adidy fanaterana ny Eokaristia Sorona amin'ny anaran'ny mahatoky (cf. Asaivo. 5:1).3
Ny Apôstôly ihany koa ny mandray avy Jesosy ny fahefana hamela ny fahotana amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanalahidy nomena an'i Petera sy ny fahefana” fehezinao sy hamaha” omena azy amin'ny fitambarany (cf. Matt. 16:19; 18:18). “Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy,” Nilaza ny Mpamonjy azy ireo, “na izany aza Mandefa anao aho. … Raiso ny Fanahy Masina. Raha mamela ny fahotan'ny rehetra, dia voavela; Raha hitana ny fahotan'ny rehetra, izy ireo voatana” (John 20:21-23; nampiana fanamafisana).
Na dia ny fahafenoan 'ny apostoly birao rehetra ny prerogatives tsy lasa teo, ny eveka, toy ny mivantana mpandimby ny Apôstôly, nijanona tao an-dohan'ny ny ambaratongam. ↩
ny teny “zava-miafina,” amin'ny teny grika, mysterion, dia nadika amin'ny teny latinina toy ny zava-miafina na “fanasan 'ny Tompo.” Ny Ortodoksa Grika mbola androany mba hilazana ny sakramentan'ny toy ny masina “Zava-miafina.” ↩
Ny Baiboly jerena ny Eokaristia ho sorona (cf. fotoana. 1:11; 1 Kor. 10:1-5, 15-22; 11:23-30; Asaivo. 10:25-26), raha ny tena izy, fanampiny manondro ny fisian'ny sacerdotal fisoronana–fa ny fanatrehany ny sorona mitaky ny fisoronana mba hanatitra azy. Pope Saint Clement, nanoratra tany Roma tamin'ny momba ny taona 96, avahana mazava tsara eo amin'ny Eokaristia Sorona natolotry ny fanompoana fisoronana sy ny ara-panahy amin'ny alalan'ny sorona ny fisoronana ny mpivavaka tsotra (cf. Clément ny Taratasy ho An'ny Korintianina 40-41). Fahazoan-kevitra ny Eokaristia Sorona, tsy Katolika indraindray miampanga ny Katolika ny “re-namono zavatra hatao fanatitra” Jesosy ao amin'ny Mass. Ny sorona Eokaristika dia tsy re-sorona, na izany aza, fa ny famerenana fanolorana ny iray Sorona an'i Kalvary. Kristy, dia tsy maty intsony; Ny fahavaratra sy ny Ra dia nofo atao eo ambony ôtely eo ambany ny fisehoany ny mofo sy ny divay, mba ny mpino Mey “manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny” araka ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny Taratasiny voalohany ho an'ny Korintianina (11:26). ↩